News - Graite electrode ahịa ga-enwe a otu ebe elu na-emekarị.
Market graphite electrode ga - ejigide akara elu ebe niile.
Ọ bụ ezie na graphite electrode ahịa anọwo na a ọnwa isii elu okirikiri, ugbu a isi graphite electrode ụlọ ọrụ ka na a na ọnọdụ nke breakeven n'ihi na-ebili ihe nke akụrụngwa. N'oge a, ndị na-eri mgbali nke graphite electrode ahịa bụ ndị a ma ama, na price nke graphite electrodes ga-anọgide na-otu ebe elu na-emekarị. Ihe ndị a na-emetụta dị ka ndị a:
1. Akwụ ụgwọ nrụpụta: A na-agbanwezi ihe ndị a na-eme n'oge a na-agbanwe agbanwe, na ihe ndị ọzọ a na-akpọ electrode, nke a na-akpọ sọlfọ mmanụ ala, agịga agịga. The price nke calcined coke na pitch nwere ihu ọma nọgidere na-enwe ngụkọta elu na-emekarị, na-eri nsogbu nke graphite electrode ahịa doro anya na elu .. N'okpuru nsogbu, graphite electrode ụlọ ọrụ nwere na-amụba ahịa ịnọgide na-enwe ha itule nke ịkwụ ụgwọ.
2.Supply siri ike:
（1, Graphite electrode ụlọ ọrụ nwere a na-eche na-ahụ ọnọdụ na mmepụta
） 2） The ọkọnọ nke ụfọdụ ntụpọ ego bụ uko.
3） Dual njikwa nke oriri ike na Inner Mongolia.
3.The ina n'akụkụ:
（1） Mgbe ememme oge opupu ihe ubi, ahịa igwe eletriki a na-agbanye n'ọkụ eletrik ka nọ n'ọkwa dị obere. Fọdụ igwe eji agba nchara ka nwere ebu nke electrodes graide a na-erepịaghị, igwe eji igwe rụọ ọrụ adịghị mma na ịzụta electrodes.
） 2, Dị ka price nke graphite electrode akụrụngwa ka na-ebili, na n'ihi na uko ọkọnọ nke àjà ihe ọ highụ -ụ-elu-ike obere na-ajụ-sized nkọwa na graphite electrode ahịa, mgbada ala ahịa na-nwayọọ nwayọọ na-anabata na-aga n'ihu na-abawanye na graphite ọnụahịa electrode.
3） Na graphite mbupụ electrode mbupu ibu dịtụ elu na nso nso a, na graphite mbupụ electrode nọ n'okpuru mgbochi ụfọdụ.
Echiche nke Ahịa: Ugbu a, n'okpuru ọnọdụ na enwere ezigbo omume na -achọ n'akụkụ ahịa nke grad electrode, ọnụ ahịa nke elektrik graphite ga-ebili nwayọ dịka ọnụahịa nke ngwa ngwa na-arị elu n'ihi mmụba na-aga n'ihu na-akwụ ụgwọ.